सफलता इतिहासमा मात्र सीमित नबनोस्! (लेख)
२०७५ साउनको १६ गते नेपाली क्रिकेट टिमले नेदरल्याण्ड्समा उसकै विरुद्ध एकदिवसीय शृंखलाको पहिलो खेल खेल्दै गर्दा नेपाली समर्थकहरूमा छुट्टै उत्साह देखिन्थ्यो । त्यो खेल नेपाली टिमको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल थियो जसको नेपाली समर्थकहरू व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । उमेर समूहका र टि-ट्वान्टी खेलमा राम्रो छाप छोडेको नेपाली क्रिकेटका लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन थियो । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नौला रहेका नेपाली खेलाडीहरूले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएको घरेलु टोलीलाई खुलेर खेल्न दिएनन् । तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको तर्फबाट पहिलो विकेट लिएको खेलमा कप्तान पारस खड्काले डेब्यु खेलमै ४ विकेट चट्काएर सुखद सुरुवात गरे ।
मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा नेदरल्याण्ड्सले प्रस्तुत गरेको सामान्य लक्ष्य भेट्टाउन नेपाललाई धौधौ पर्यो र अन्त्यमा जीत इच्छामा मात्र सीमित भयो । नेपालले आफ्नो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय करियर जीतका साथ सुरुवात गर्न सकेन तर शृंखलामा ० – १ ले पछि परेको अवस्थामा दोश्रो खेलमा १ रनले विजयी हुँदै आफ्नो योग्यता सावित गर्यो । दोश्रो खेलमा नायक सावित भए सोमपाल कामी, जसको ६१ रनको मद्दतमा नेपालले सम्मानजनक स्कोर खडा गर्न सक्यो ।
आखिर नेपाली क्रिकेट यो स्थानसम्म कसरी आइपुग्यो त?
हालसालै क्रिकेटमा चाख राख्न थालेकाहरूलाई यो पक्कै पनि जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ । क्रिकेट खेल नेपालमा पहिलोपटक सन् १९२० को दशकमा भित्रिएको थियो । त्यस बेला राणा परिवारमा ‘जेन्टलमेन्स गेम’ भनेर चिनिने क्रिकेट खेल एकदमै प्रिय थियो । वि.स. २००७ सालको क्रान्तिपछि मात्र क्रिकेट खेलले व्यापक रूप लिएको मानिन्छ । १९४६ मा क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)को स्थापना भएसँगै नेपाली क्रिकेटले आैपचारिक यात्रा सुरु गर्यो । १९८८ मा एलिफिएट टिमको मान्यता पाएको नेपाली क्रिकेट टिमले १९९६ बाट एसोसिएट टिममा प्रवेश पायो । त्यही वर्ष नेपालले पहिलो एसीसी ट्रफीमा सहभागिता जनाएको थियो ।
सन् २००० र २००२ को एसीसी ट्रफीमा निरन्तर सहभागी भएको नेपालले २००४ मा पहिलो पटक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल्ने मौका पायो । त्यस बेला नेपालले आइसीसी अन्तरमहादेशीय कपमा मलेसियालाई हराउँदै यूएईसँग बराबरीमा रोकिएको थियो । २००६ को एसीसी ट्रफी नेपालका लागि झन् सम्झनलायक रह्यो । सो प्रतियोगितामा उसले म्यानमारलाई १२.१ ओभरमा जम्मा १० रनमा समेटेको थियो । म्यानमारले बनाएको यो स्कोर अझै पनि एकदिवसीय क्रिकेटमा कुनै पनि टिमले बनाएको सबैभन्दा कम स्कोर हो । म्यानमार विरुद्धको यस खेलमा नेपालले दुई बलमै लक्ष्य भेट्टाउँदा मेहबुब आलम र विनोद दासले क्रमशः ७ र ३ विकेट लिएका थिए ।
त्यसपछि नेपाली क्रिकेट टिम झनै सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो । २००८ को ‘आइसीसी क्रिकेट लिग डिभिजन फाइभ’ मा मोजाम्बिक विरुद्धको खेलमा मेहबुब आलम एक्लैले १० विकेट चट्काएका थिए । उत्कृष्ट प्रदर्शनका बावजुद नेपाल प्रतियोगितामा तेस्रो स्थानमा खुम्चिँदै २०११ को एकदिवसीय विश्वकपको छनौट खेल खेल्नबाट वञ्चित भयो ; तर २०१० मा घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै फाइनलमा अमेरिकालाई हराएपछि नेपाल डिभिजन फाइभबाट डिभिजन फोरमा बढुवा भयो ।
कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्दै नेपाली क्रिकेट टोलीले दिन प्रतिदिन नयाँ खुड्किला पार गर्दै गयो । उचित खेल मैदानको अभाव र वर्षा मासमा हुने अपुरो अभ्यास नेपाली क्रिकेट टोलीको खेलमा सधैं बाधक बन्ने गर्थ्यो । तिनै बाधाहरूसँग जुध्दै उसले सन् २०१३ मा बर्मुडामा आयोजित ‘आइसीसी क्रिकेट लिग डिभिजन थ्री’ मा आफूलाई शीर्ष स्थानमा उभ्याउन सफल भयो ।
२०१४ को वर्ल्ड ट्वान्टी-ट्वान्टी प्रतियोगितामा छनौट हुनुले नेपाली क्रिकेट इतिहासमा एउटा सुनौलो अध्याय थप्ने काम गर्यो । घरेलु प्रतियोगिताको खडेरी लागेको बेला तत् पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताहरूको आयोजना हुन थाले । २०१४ मै मलेसियामा आयोजित ‘आइसीसी क्रिकेट लिग डिभिजन थ्री’ मा पहिलो स्थान हात पारेर आफूलाई माथिल्लो डिभिजन धकेल्यो । २०१५ मा आयोजित आइसीसी क्रिकेट लिग डिभिजन टु मा चौथो स्थानमै चित्त बुझाएको उसले सोही प्रतियोगिताको अर्को संस्करण (२०१८) मा दोश्रो स्थान ओगट्दै विश्वकप छनौट खेल्ने मौका प्राप्त गर्यो । जिम्बाब्वेमा आयोजित विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा असफल रहे पनि उसले गरेको प्रदर्शनका आधारमा आइसीसीले उसलाई २०१८ मार्च १५ मा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्यो ।
कहिले क्यानभित्रको किचलो त कहिले राजनीतिक हस्तक्षेप नेपाली क्रिकेटका लागि सधैं खतरा बन्न पुगे । क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी) ले क्यानलाई निलम्बन हुनु पनि नेपाली क्रिकेटका लागि जटिल कालखण्ड बनेर अडियो ।
सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर चिनिने गरेको नेपाललाई अब विश्वसामु चिनाउन क्रिकेटको पनि भूमिका रहनेछ । नेपालीहरूको पीडा र चोटमा मल्हम लगाइदिने काम गरेको नेपाली क्रिकेट टोलीले प्राप्त गरेको उपलब्धि साँच्चै नै गौरवमय र अभूतपूर्व रहने छ । यद्यपि नेपाली क्रिकेट टिमको अबको लक्ष्य एकदिवसीय विश्वकपमा छनौट हुनु र टेष्ट क्रिकेटको मान्यता प्राप्त गर्नु हुनेछ । सरकारले नेपाली क्रिकेटलाई अझै बलियो बनाउन पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । खेलाडी स्वदेश फर्कँदा विमानस्थल पुगेर स्वागत गरेझैँ गर्ने तर बाँकी दिन खेलाडीहरूका उपलब्धि अवमूल्यन गर्ने हो भने यी उपलब्धि र सफलता इतिहासमै सीमित नहोलान् भन्न सकिन्नँ ।
साथमा एक दिवसीयमा नेपालले जितको इतिहास रच्दाका तस्बिरहरु